Televiziona Malagasy: Ny minisitra no misafidy izay ho mpanolotra vaovao
mercredi, 20 février 2019 09:03
Endrika vaovao maromaro no ho hitan’ny mpijery fahitalavi-pirenena ato ho ato. Niditra an-tsehatra mihitsy ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, tamin’ny fifantenana izay ho mpanolotra vaovao manomboka eto.
Toy ireny fifantenana tovovavy tsara tarehy sy bikaina (Miss) ireny, ankoatra izay metimety taminy, tsy nijerena traikefa no nifantenana azy ireo. Ampahibemaso, nandritra ny famoriany ny mpiasa tao amin’ny TVM, omaly tolakandro no nanatanterahana izany.
Nakisaka ry Hery Rakotomalala, Nathan Mahaiavy, Rose Tiana Muriel, Suzetta, Fidisoa Andriamasiarivelo, Lemana Elysée, Tantely Tsimarofy, Dina Ah-Kam mbamin-dry Narindra Rafenomanana. Miora Hariniaina sy Haingo Rabarinala no mety hanohy hanolotra vaovao.
Anio dia anio ihany dia efa saika ireo vaovao, voatsonga ho manja sy mahay mihaingo ireo, no hanomboka hanolotra vaovao, saingy nangataka ireo mba hianatra aloha ka amin’ny fiandohan’ny volana martsa any no hanomboka hiseho télé.
Nangahiahy ny betsaka nanoloana ny fanapahan-kevitra. Tao ny nanontany anankam-po hoe dia tsy maintsy ny minisitra ve no hisafidy ny mpanolotra vaovao, nefa misy teknisianina toy ny Tale ary koa Tale jeneraly mitantana ity TVM ity, sa efa endrika fanilihana ankolaka azy ireo ihany koa izao ?
Ny Televiziona Malagasy dia endriky ny fihavanam-pirenena sy firaisam-pirenena nefa ho takona izay rafi-pisainana izay manomboka eto, manoloana izao fanadiovana ny mpanolotra vaovao eo anivon’ny TVM izao, hoy ny fanamarihan’ny mpiasa.